January 2022 – Tha Din
2 killed including3month-old infants,5wounded from shootings by BGF in Phapon district
DaVid Boi, Tha Din January 31, 2022
BGF under the control of military junta used heavy artillery in Htee Law The Hta Village, Htee...
First Anniversary of the coup by the military junta denounced by Myanmar in America
Denouncement and opposition protests were held at Fort Wayne, Indiana, USA, and also paid tribute by laying...
Junta’s checkpoint, at the front of Shwebo University, was attacked usingadrone
The checkpoint of Junta forces, stationed at Shwebo University, Sagaing Division, was attacked usingadrone, on...
Phyu Saw Htee group threatens to attack if the people close the shops In Mawlamyine on February 1
Phyu Saw Htee groups have been sticking the flyers threatening the people that if the shops remain...
မင်းတုန်းတိုက်ပွဲတွင် ဗိုလ်မှူးတဦးအပါအဝင် စစ်ကောင်စီတပ်သား (၇) ဦးသေဆုံး ဘုရားကျောင်းတကျောင်းနှင့်နေအိမ်များမီးရှို့ကာ ဗုံးများထောင်သွား
Amy, TD Myanmar January 31, 2022
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင် ဗိုလ်မှူးတဦးအပါအဝင်(၇) ဦးထိ ကျဆုံးမှုရှိလာနေပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေရာရှိ ဘုရားကျောင်းတကျောင်းနှင့် နေအိမ်များကို မီးရှို့သွားကြောင်း PDF အဖွဲ့များထံကသိရသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည်အထိ ထပ်မံအတည်ပြုချက်များအရ...
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် ကျောက်တံတား၊ သာကေတ၊ တောင်ဥက္ကလာ တွင် ဗုံးများ ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲနေ၊ မန္တလေးနှင့်ပဲခူးရဲစခန်းအနီးတွင်လည်း ဗုံးပေါက်
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် ကျောက်တံတား၊ သာကေတ၊ တောင်ဥက္ကလာ တွင်ယနေ့ တစ်နေကုန် ယခုအချိန်အထိ ဗုံးများ ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲနေပြီး မန္တ လေးတွင်လည်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများထံမှ သိရှိရသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၃၁...
သေရမည်ကိုမကြောက်ဘဲ မပြီးဆုံးသေးသည့် တော်လှန်ရေးကိုညီညွတ်စွာလုပ်ဆောင်ကြရန် KNU တပ်မဟာ(၇) တပ်မဟာမှူးပြောနွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပေါင်းစပ်ပြီဟုဆို
မပြီးဆုံးသေးသည့် တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်အောင် လက်ရှိအသက်ရှင်နေသည့် ညီအကိုများ ညီညွတ်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) တပ်မဟာ(၇) တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဖောဒိုက ပြောကြားသည်။ KNU တပ်မဟာ ခုနစ်ခုအနက် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးသည့် တစ်ခုတည်းသော...
Hero Tiger Force ၏ အထူးပြောက်ကျား ကွန်မန်ဒို သင်တန်းဆင်းပွဲ
Hero Tiger Force မှ ဦးစီး ၍ သင်တန်းပေးနေသည့် အထူးပြောက်ကျား ကွန်မန်ဒို သင်တန်းဆင်းပွဲ ကို ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်PDF...
Revolutionary forces opened gas station in Demoso
Revolutionary forces opened “Spring” gas station in Karenni state, Demoso. The gas station started operating on 21...
မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဆရာတော်များ ဖက်ဆစ် စစ်ကောင်စီ တော်လှန်ရေး ညသပိတ်ပြုလုပ်
မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဆရာတော်များ ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် “တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ အကျယ်လောင်ဆုံးအသံများကို ကမ္ဘာကြီးကလည်း ကြားနိုင်ပါစေ။ ပူး​ပေါင်းပါဝင်​ပေးကြပါ – သံဃသမဂ္ဂ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်...